Enwere m ike Naghachi Data si MacBook Pro Draịvụ?
Nzọụkwụ na-agbake Data si MacBook Pro Draịvụ
1 Enwere m ike Naghachi Data si MacBook Pro Draịvụ?
My MacBook Pro jiri ụnyaahụ. Ugbu a oge ọ bụla m na-agbalị reboot ya, m nwetara a isi awọ na ihuenyo. Amaara m na ọ gbajiri. Ma, m ka ya bụrụ na m ike weghachite data si MacBook Pro ike mbanye, n'ihi na m nwere ọtụtụ ihe bara uru faịlụ na ya. M maara ọ bụrụ na m zitere MBP ka a ọrụ center maka ịrụzi, m niile faịlụ ga-kpam kpam ẹfep. Biko gosi m otu ụzọ na-m data azụ. Daalụ nke ukwuu.
Ebe a bụ ozi ọma: dị ka ogologo oge dị ka ị pụrụ wepụ gị MacBook Pro ike mbanye na jikọọ na ya na a ọhụrụ Mac kọmputa, ohere nke na-azụ faịlụ na ya dị ukwuu. Na-agụ nke a ndu na ị ga-enwe iji naghachi data si MacBook Pro ike mbanye na mfe na n'ihe ize ndụ-free ụzọ.
Nke mbụ niile, i kwesịrị ime ka n'aka na draịvụ ike na gị na-echi ọnụ n'ala ma ọ bụ agbajikwa MacBook Pro ka nwere ike ike jikọọ na ọzọ Mac na ghọtara dị ka ihe mpụga ike mbanye. Mgbe ahụ ị pụrụ agbalị iji a MacBook Pro ike mbanye data mgbake usoro dị ka Wondershare Data Recovery for Mac ime otú ahụ. A na ịba uru dị maka data mgbake si mma-arụ ọrụ MacBook Pro ma ọ bụ agbajikwa MacBook Pro. Na ya, i nwere ike effortlessly naghachi a dịgasị iche iche nke data gị MacBook Pro ike mbanye, dị ka photos, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ, ozi ịntanetị, wdg
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery for Mac si n'okpuru, ọnwụnwa a version-enyere gị aka iṅomi gị MacBook Pro ike mbanye tupu ịzụta zuru version mgbake.
2 Nzọụkwụ naghachi Data si MacBook Pro Draịvụ
Ugbu a, ka ịmụta otú naghachi faịlụ site na draịvụ ike nke a gbajiri / anuahade MacBook Pro. Ọ bụrụ na gị MacBook Pro arụ ọrụ nke ọma, ị dị nnọọ mkpa ibudata na wụnye ịba uru na ya na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ hazie mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ-amalite MacBook Pro Draịvụ Iweghachite
Jikọọ gị MacBook Pro ike mbanye ọzọ Mac kọmputa na ẹkedori Wondershare Data Recovery for Mac na ya, ị ga-awa na ụfọdụ mgbake nhọrọ. I nwere ike ịgụ ntuziaka na mmemme window nlezianya na họrọ mode na nke ahụ bụ ihe kasị mma maka gị.
Ebe a, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode iji weghachi data si MacBook Pro ike mbanye.
Nzọụkwụ 2 iṅomi MacBook Pro Draịvụ maka Lost Files
Ugbu a mmekọ ga chọpụta na-egosipụta na niile ike draịva na gị Mac gị, gụnyere MacBook Pro ike mbanye. Ị dị nnọọ mkpa họrọ ya na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si MacBook Pro Draịvụ selectively
Na njedebe, niile recoverable faịlụ ga-edepụtara ke window mgbe scanning. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ndị a faịlụ ị na-aga iji weghachite na pịa "Naghachi" zọpụta ha na gị na Mac.
iMac Iweghachite: Olee naghachi Data si iMac
Top 10 iPhone ndabere onyenlereanya maka Windows na Mac
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi MacBook Pro Draịvụ Iweghachite